लिङ्गको आकार कत्रो भए महिलालाई यौन सन्तुष्टि दिन सकिन्छ?जानौ? – PathivaraOnline
Home > मनोरञ्जन > लिङ्गको आकार कत्रो भए महिलालाई यौन सन्तुष्टि दिन सकिन्छ?जानौ?
Bishal May 16, 2022 मनोरञ्जन 0
उत्तरः लिंग कत्रो हुनुपर्ला ?
कामसूत्रका बारेमा ज्ञान भएको कुरा सुन्न पाउँदा खुसी छु ।
वात्सायनले नापअनुसार लिङ्गलाई खरायो, वृष -साँढे तथा अश्व -घोडा तीन वर्गमा विभाजित गरेका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउनुभएकै होला । सामान्यतया उत्तेजित अवस्थामा लिंगको सालाखाला लम्बाइ यस्तै १५ सेन्टिमिटर हुन्छ ।
धेरै जसोको लिङ्गको लम्बाइ १३ देखि १६ दशमलव ५ सेन्टिमिटरभित्र परे पनि यस्तै ७ प्रतिशत जतिको लिङ्ग ११ सेन्टिमिटरको हाराहारीमा हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । केही मानिसको लिङ्ग भने साँच्चिकै सानो हुनसक्छ र त्यस्तो स्थितिलार्इ अंग्रेजीमा Micropenis वा micro-phallus भनिन्छ ।
***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला*****
शिशु जन्मँदा लिङ्ग तन्काएर नाप्दा १ दशमलव ९ सेन्टिमिटर अर्थात् पौने ९३र४० इन्चको भएमा शंका गर्नुपर्ने हुन्छ र कारणको खोजिनिती गर्नुपर्छ ।
यस्तै हजार जनामध्ये ६ जनामा यस्तो स्थिति हुन सक्ने देखिएको छ ।
लिङ्ग एक विशेष अङ्ग हो र यो अङ्ग मानवशरीरको एक अङ्गका रूपमा मात्र नभै यसको सांकेतिक महत्व बढी छ । सन्तान उत्पादन गर्ने अङ्गका रूपमा भएर पनि यस्तो भएको हुन सक्छ ।
कतिपयले यसको आकार वा लम्बाइलाई पुरुषको व्यक्तित्व वा भनौ उसको पौरुषत्वसँग नै जोडिएको मान्छन् ।
त्यसैले कतिपय व्यक्तिमा आङ्खनो लिङ्गप्रति निकै चासो र चिन्ता हुन्छ । कतिपय व्यक्तिले लिङ्गको लम्बाइ वा मोटाइ सामान्य भएपनि सानो भयो कि भनेर चिन्ता गर्छन् ।
यस्तो स्थितिलाई अंग्रेजीमा Small Penis Syndrome भनिन्छ ।
के अर्को व्यक्तिको चरमसखु को जिम्मा तपाइले लिन सक्नुहुन्छ ?
कुनै पनि व्यक्तिले यौन चरमसुख पाउने कुरा उसको शारीरिक पक्षका साथै मानसिक पक्षसँग अन्तरङ्ग सम्बन्ध राख्छ । व्यक्ति पहिले मानसिक रूपमा नै त्यसका लागि तयार हुनु आवश्यक छ र उत्तेजनाका सन्देश उसले शारीरिक रूपमा प्राप्त गर्न बाह्य कुराले सहयोग गर्ने हो ।
यस अर्थमा अर्को व्यक्तिले यौन चरमसुख पाउने नपाउने कुराको जिम्मा लिन वा ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन, सहयोग गर्न मात्र सकिने हो । अर्को कुरा तपाइले महिलाको सबैभन्दा बढी यौन संवेदनशील अङ्ग भगांकुर हो भनेर थाहा पाइसक्नुभएकै होला ।
प्रायजसो महिलाले यही अङ्गको घर्षणबाट नै यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्छन् । सामान्यतया महिला तल र पुरुषमाथि भएर गरिने यौनसर्म्पर्कमा लिङ्गले भगांकुरलाई घर्षण गर्दैन ।
लिङ्गको लम्बाइ वा मोटाइ बढाए पनि यसले भगांकुरको घर्षणमा खासै फाइदा पुग्ने होइन बरु त्यसका लागि एकातिर तपाइको लिङ्गभन्दा औंला नै बढी सहयोगी सावित हुनसक्छ भने अर्कातिर आसन परिवर्तन ।
महिलाको योनिको भित्री भाग नभै बाहिरी -योनिद्वारनिरको भाग यौन संवेदनशील हुन्छ ।
नेपालीमा भाषण गर्दै मोदीले भने- बुद्धकाे जन्मभूमिमा आउँदा छुट्टै आनन्द आउँछ
फोटोग्राफरले ऐश्वर्या कार चढ्दै गर्दा गलत कोणबाट खिचेपछि भयाे हंगामा….हेर्नुहाेस् तस्विरहरू
मलाई गर्भवती बनाउने लाई ३ लाख नगत दिन्छु सम्पर्क नम्बर सहित!
२० वर्ष पार गरेपछि म’हिलामा आउँछ यस्ता ५ प’रिवर्तन
एउटै फोटोले सामाजिक सञ्जाल हल्लिएकाे यो साता! पत्ता लागे मोटरसाइकल सहितकाे सबै यथार्थ! हेर्नुस्